05 | February | 2020 | Danya Wadi
VOA 05 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2020 ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရာရောက်မယ့် လုပ်ရပ်တွေကို ဟန့်တားနိုင်အောင် မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICJ) ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်္ဂါနေ့က ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့ အတွက်တော့ သဘောတူညီမှု မရခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီအတွက် လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) နိုင်ငံတွေကသာ ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ICJ က ချမှတ်လိုက်တဲ့ ကြားဖြတ် အရေးပေါ်စီမံချက်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ICJ က ချမှတ်ထားတဲ့ ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီ ခိုင်မာတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် […]
Prothum Alo—— Feb 04, 2020 Diplomatic Correspondent . Dhaka A delegation of ICC prosecutor`s office holdsamedia conference in Dhaka on4February 2020. Photo: Prothom Alo The International Criminal Court (ICC) has officially lanunched an investigation into atrocities committed against the Rohingya in the Rakhine state of Myanmar. Phakiso Mochochoko, director of the […]
AA James Reinl 04.02.2020 Diplomats bash Myanmar’s human rights record after Security Council closed-door meeting UNITED NATIONS Myanmar must start prosecuting those responsible for atrocities against its mostly-Muslim Rohingya minority and uphold decisions by international judges, European diplomats said Tuesday in New York. Speaking with reporters afteraclosed-door meeting of the UN Security Council, […]